China ubungakanani obahlukeneyo wenayiloni washer mveliso kunye nabathengisi | IH & F. nylon
Izinto eziphathekayo PA
Igama lebrand HF
Umbala yenza ngokwezifiso
Iimpawu zeNylon washer
Xa kuthelekiswa namawashi esinyithi, banokugquma ngokugqwesileyo, ukumelana nokubola, ukufakwa kwe-thermal kunye neepropathi ezingezozibuthe, kwaye zinobunzima, ezenza ukuba zisetyenziswe ngokubanzi kumacandelo ahlukeneyo kubandakanya ii-semiconductors, izithuthi, ishishini le-aerospace kunye nokuhonjiswa kwangaphakathi. Inani lezinto ezisetyenzisiweyo likwakhona ukuya kuthi ga kwi-10 yeemathiriyeli, kubandakanya i-PA66, i-PC, i-PEEK yeplastiki ekhethekileyo enentsebenzo egqwesileyo, eqiniswe ngeglasi yefayibha yeRENY kunye nePPS, iflourine resin PTFE, PFA kunye nePVD.
Ukuhlamba i-nylon kwenziwa yinkqubo yokubumba ngenaliti, le ndlela yokubumba iyafana nomgaqo wokusetyenziswa kweesirinji, umzimba wesirinji ngumatshini wokubumba inaliti, inaliti yolwelo inyibilikisiwe izinto zeplastiki, kunye noxinzelelo lomnwe kwisirinji Nalu uxinzelelo lwe-hydraulic, ukusetyenziswa koxinzelelo lwenaliti ukuze izinto ezingafunekiyo ngomngxunya omncinci obizwa ngokuba "ngumnyango" kwisikhunta emva komngxunya! Ezona mpawu ziphambili zezi: ukuveliswa kobuninzi bomgangatho ofanayo ngexesha elifutshane; ukugqibezela oomatshini abasuka ekondleni izinto ezingavuthiyo ukukhupha iimveliso ezibunjiweyo; kunye nokukwazi ukuvelisa iimveliso ezibunjiweyo ngokuchaneka okuphezulu kunye nobume obunzima. Ezona mpawu ziphambili zezi: ukukwazi ukuvelisa izixa ezikhulu zeemveliso ezibunjiweyo zomgangatho ofanayo ngexesha elifutshane; ukuzenzekelayo okupheleleyo kwenkqubo ukusuka kwigalelo lezinto ezisetyenzisiweyo ukususwa kweemveliso ezibunjiweyo; kunye nokukwazi ukuvelisa iimveliso ezibunjiweyo ngokuchaneka okuphezulu kunye nezakhiwo ezinzima. Ngakolunye uhlangothi, utyalo-mali kwizixhobo zikhulu, kwaye iindleko zokubumba ziyabiza. Ukujonga ukwehla komngundo, kunokuthiwa le ndlela ayifanelekanga kwimveliso encinci yebhetshi.
Egqithileyo Nylon cliver pulley ngexabiso elifanelekileyo
Ukuhlamba iimpahla kwenayiloni emnyama
Inayiloni yamagxa ehlombe
Inayiloni ephezulu yoMsuki weengubo